En vente actuellement 23/11/2018
Manary 5 kilao, amin’ny ranona citron…izao atao!
Feno otrikaina mahasoa sady manadio ny voasarimakirana. Ahitana karazana asidra mandoro tavy rao anatiny no sady mandrindra ny tahan’ny siramamy ao anaty ra.
Raha noheverina fa nahafinaritra an’ i Kanye West
foana ny fomba fiakanjon’i Kim Kardashian vadiny hatramin’izay dia fantatra izao fa tsy faly tamin’izany ihany izy. Nandritra ny resadresaka tao anatin’ilay fandaharan’i Ellen DeGeneres Show no nilazan’i Kim Karsahian izany.
Lasopy amin’ny calamar
Akora ilaina · Dibera 2 sotrokely · Sira sy dipoavatra · Nofon’akoho 200g · Poarao 1, trondro calamar 100g · Ovy · Patsa be 1/2kg · Vermicelle 100g · Olatra mainty maina 10g · Karaoty voakiky 1 · Soja 1 sotrokely · Nofon-trondro · Persily sy kotomila voatetika · Saosy sakay izay tiana
shopping « chaussure »
1. Escarpin paillette P:37 8 cm 50.000ar - Contact: 034.41.980.84 Immeuble Nouveauté Behoririka box40 2eme etage
Ny fomba fanadiovana tarehy tena mety, isa-kariva
Rehefa lany iny ny akora fanadiovanao tarehy dia azonao atao tsara ny mampiasa akora natoraly. Ny atoronay anao eto anefa dia azonao ampiasaina tsara amin’ny alina, hanadiovana tarehy mialoha ny hatory.
Ankizy kely miisa 5 , voadonan’ny fiara teo amin’ny faritra voatokana hiampitana
Ankizy 5 no indray maty ary 18 hafa kosa naratra tao akaikin’ny sekoly iray ao Huludao, faritra iray Avaratra Atsinanan’i Sina. Handeha hiampita arabe teo amin’ny faritra voatokana ho amin’izany ireo vondron’ankizy nirava avy nianatra omaly maraina, no nofaohan’ny fiara iray.
Ankizilahikely mararin’ny homamiadana, nihaona tamin’ny mpihira tiany indrindra
Afaka nanatanteraka ny nofinofiny hihaona amin’ny mpanakanto tiany indrindra i Julien, ankizilahikely 5 taona, tratry ny homamiadana.
Nesorina ny nonony sy ny tranon-jazany noho ny fahadisoan’ny valim-pitiliana
Vehivavy iray 36 taona no voatery nesorina nono sy tranon-jaza vokatry ny fahadisoan’ny valim-pitiliana homamiadana nataony.
Misy lehilahy miaraka amiko efa ho 5 volana izao.
Mankany an-tranony foana aho isaky ny mihaona izahay dia miray ara-nofo foana izahay. Izaho aloha efa fantatry ny olona ao an-tranony.
« L’honnêteté n’est pas un habit des dimanches, mais un vêtement de tous les jours » Tristan Bernard
Toa zary efa mahazatra izany voasoloky, voafitaka, voaroba trano, tratran’ny fivadiam-pitokisana, sns amin’ny fiaraha-monina iainantsika amin’izao fotoana.
Black Friday : Aiza avy ireo manao fihenam-bidy anio?
Zoma ny andro ka rehefa toy izao dia misy ireo tranombarotra no manomana tolotra manokana antsoina hoe “Black Friday”, hanamarihina ny faran’ny herinandro. Araka izany indrindra dia ireto ny ivon-toerana manao io tolotra io.
Paipaika azo hanitarana ny kiraro tery
Toe-javatra anisan’ny tena mampalahelo antsika vehivavy ny mahita kiraro tena tiana kanefa tery. Raha tsy tena kely loatra izany kiraro izany, dia misy ihany ny paipaika azo hatao hanitarana ny kiraro mba hahafahana manao azy.